Nanomboka ny taona 1977 i Madagasikara no tafiditra ho mpikambana ao anatin’ny Banky afrikanina hoan’ny fampandrosoana ary isan’ny firenena Afrikanina 54 misitraka ny fanampiana avy amin’ny FAD. Voalohany teo amin’ny tantara isika no handray ny Fivoriana hamaritana ny tetibola entina hanampiana ny firenena Afrikanina na ny FAD. Tsy latsaky ny 1,9 lavitrisa dolara Amerikanina no efa novatsian’ny BAD hoan’I Madagasikara, raha ny fanazavan’ny filohan’ny BAD Akinwumi Adesina. Sehatra nibahan-toerana tao anatin’izany ny fanamboaran-dalana, ny fambolena sy ny fiompiana ary indrindra ny famatsiana herinaratra. Tanjon’ny BAD rahateo hoy izy ny hampandroso aingana ny firenena Afrikanina.
Toy ny fanao isaky ny 3 taona, mizara 3 ny fivoriana hamaritana ny tetibola entina hanampiana ny firenena Afrikanina. Ka hoan’ity andiany faha 15 ity, dia tany Abidjan no Fivoriana volohany, ary eto Antananarivo ny faharoa. Tonga nitsena ny filohan’ny BAD teny Ivato moa ny minisitry ny toekarena sy ny fitatanam-bola Richard RANDRIAMANDRATO omaly.
Rojo Christelle RAKOTOMALALA - Yves JANHEL